Nepali Songs Archives - Rochak Khabar
काठमाडौँ । नेपाली सांगितक क्षेत्रमा विगत १२ देखी निरन्तर क्रियाशिल रहेका गायक रामकृष्ण श्रेष्ठले नयाँ लोक पप गीत ‘रुपैको धाक नलाउ’ बजारमा ल्याएका छन् । नयाँ पुस्ताको जन–जिब्रोमा निस्कने रुपको प्रशंसालाई गीतमा समेटिएको गायक श्रेष्ठले बताए । गीतमा गायक श्रेष्ठसंगै मिलन अमात्यको आवाज रहेको छ । अम्बिका गुरुङको शब्द, अशुसेन लामाको संगित रहेको उक्त गीतलाई शुक्रबारदेखी बजारमा ल्याइएको छ । गीतको म्युजिक भिडियोमा शिवदास गुरुङ, अस्मिता राना मगर,...
कसले हान्यो मोडल दुर्गेश थापालाई गोलि ? हेर्नुहोस भिडियो
माया संसारकै एउटा सुन्दर शब्द जहाँ संसारलाइ सम्हाल्ने क्षेमता मायालेनै बोकेको हुन्छ।जुन माया सबै प्रति हुन सक्छ।यही माया भित्र कहिलेकाही अचम्मले एक्लो पनको आभास हुनु पर्ने देखिन्छ सोहि माया भित्रका कुरा गर्दै छ यस गीतले ।दुर्गेश थापा अभिनयका एक प्रखर व्यक्ति हुन् सोहि कलाकारको अभिनयमा साथ् सचिता साहीले दिएकी छिन भने आवाजमा सबैको मन मुटुको धड्कन बहुचर्चित गायिका बिष्णु माझी र गंगा दत्त गिरीको सुमधुर आवाज रहेको अर्को मार्मिक दोहोरी गीत “ज...
काठमाण्डौ। अभिनेता दयाहाङ राई स्टारर नेपाली चलचित्र ‘भैरे’को पहिलो अफिसियल गीत सार्वजनिक भएको छ । शुक्रवार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच कलाकार र निर्माण टिमको उपस्थितिमा ‘सान्नानीलाई भेट्न आउँदा’ बोलको गीत सार्वजनिक गरियो । गीतमा अभिनेताहरु विक्रान्त बस्नेत, बुद्धि तामाङ र अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटी फिचरिङ्ग छन् । निर्देशक एभरेष्ट सुर्य बोहरा र बसन्त सापकोटाको शब्द रहेको गीतमा बसन्तको संगीत सुन्न सकिन्छ । यम बराल, बसन्त सापकोटा र मेलिन...
‘कृ’को ‘यति यति पानी’ (भिडियो)
माघ २६ गते रिलिज भएको यस वर्षकै बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘कृ’को पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ। अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०१८ को पूर्वसन्ध्या पारेर ‘यति यति पानी’ बोलको क्लब डान्स गीत सार्वजनिक गरिएको हो । गीतमा अनमोल केसीले क्लबका दर्जनभन्दा बढी डान्सरसँग कम्मर मर्काएका छन्। अल्मोडा राना उप्रेतीको स्वर रहेको गीतमा शब्द र संगीत राजेन्द्र भट्टको रहेको छ। https://youtu.be/nsquj4B8Wi0
अचार मनपर्छ ? होसियार अचारको सेवनले हुनसक्छ यी ५ नोक्सानी
खानाको साथमा चटपटे अचार रुचाउने मानिसको कुनै कमी छैन । वास्तवमा अचारले खानाको स्वाद र खाना प्रति रुची बढाउँछ । यदि तपाई पनि ती मानिसहरूमा पर्नुहुन्छ, जसले नियमित रूपमा अचार खान्छन् भने एक पटक अचार खानुको यी ५ निकै हानिकारक नोक्सान बारे अवश्य जानकारी राख्नुहोस् । १- अचारमा तेलको मात्रा बढी प्रयोग हुन्छ । यसमा प्रयोग गरिने मसला पनि पाकेको हुँदैन, जसको कारण कोलेस्ट्रोल र अन्य समस्या हुनसक्छ । २- अचारको प्रयोगले पेटमा अम्लीयता बढाउँछ,...